Vaovao - Mampitombo ny tsena fangatahana amin'ny sarimihetsika optika BOPET.
Ny tsenan'ny horonantsary Optical PET dia mety be dia be: Miaraka amin'ny fampandrosoana haingana ny FPD, ny teknolojia fitsitsiana angovo. ary indostrian'ny PV, ny sarimihetsika PET optique dia mampiseho fahamboniana matanjaka. Ho an'ny LCD, farafahakeliny 7-8 pcs ny filma PET optique tokony hampiasaina (sarimihetsika 2 diffuser, horonantsary prisim 1, horonantsary retardation 2, horonantsary anti anti glare, sary miaro 1 sarimihetsika) .Ny sary an-tsary sy ny FPD no fironana manerantany amin'ny fampandrosoana. amin'ny maha-fitaovana fototra ho an'ny LCD azy, ny optical PET film dia mankafy tsena mety lehibe.
Fanadihadiana amin'ny tsena optika PET
Voalaza fa vitsy ny orinasa afaka mamokatra op fil PET opt ho an'ny fampiharana LCD noho ny filàna avo lenta amin'ny kalitao sy ny haitao. Mitsbishi sy Toray dia nahazo ny tsena 90% ho an'ny sarimihetsika PET optique ho an'ny fampiharana polarizer. Orinasa Japoney 4 hafa no manao ampihimamba ny sarimihetsika PET optique ho an'ny BLU. Ankoatr'izay, ny orinasa Koreana koa dia miezaka ny hiditra amin'ity tsena ity.
Mitsubishi dia nampiroborobo ny fahafahan'ny famokarana sarimihetsika PET manodidina ny 220000 taonina isan-taona, ka i Santo any Japon dia mitentina 80 000 taonina, 55 000 taonina avy amin'i Alemana, Etazonia, 65 000 taonina, Indonisia 20 000 taonina. Makitsubishi dia mandray 27% ny tsena optika manerantany Sarimihetsika PET, izy ihany koa no mpanamboatra iray any Japon manao ilay sarimihetsika PET optique. Mba hanomezana fahafaham-po ny fitomboan'ny filan'ny PET optique dia mikasa ny hanampy tsipika famokarana 40000 taonina i Mitsubishi izay hahatonga an'i Mitsubishi ho mpamokatra sarimihetsika PET optika lehibe indrindra ao izao tontolo izao miaraka amin'ny fampanjariam-bola antenaina manodidina ny 20 tapitrisa RMB (USD 233 Mil.) mba hanamafisana ny toerany ho mpanamboatra sarimihetsika PET optika lehibe indrindra.
Fanadihadiana tsena optika PET any Shina
Miaraka amin'ny fampivoarana ny fitaovana an-trano miorina amin'ny LCD TV, i Azia dia nanjary nifantoka tsikelikely na dia ny teknolojia fototra aza. dia noforonina tany Etazonia. Japon, Korea atsimo, tanety sinoa, sinoa Taiwan no firenena misolo tena ny sehatra manerantany. Tratra tsikelikely i Shina rehefa avy eo na eo aza ny fanombohana taraiky.